မော်ဒယ်ဇာဇာထက်က ပြတ်ပီးသား ရည်းစားဟောင်း ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ လုပ်စားနေ သူတစ်ယောက် အကြောင်း ချပြလာ – Zartiman
မော်ဒယ်ဇာဇာထက်က ပြတ်ပီးသား ရည်းစားဟောင်း ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ လုပ်စားနေ သူတစ်ယောက် အကြောင်း ချပြလာ
ဇာဇာထက် ကတော့ သူမရဲ့ ပြတ်ဆဲပြီး သားအချစ်ေ ရးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အသုံးပြုပြီး လုပ်စားနေသူ ကို အားလုံး အမြင်ရှင်းအောင် ဒဲ့ပဲ ပြော ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လိုက်ထှာတော် ရုံပဲဂျင်းဖမ်းပါ လူတွေကန ဂိုထဲကမှပြော ချင်နေတာ။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေယူသုံးပြီးသူ့ဖေ့ဘွတ်မှာ တင်ထားတာကို သူငယ်ချင်းကမြင်ပြီး ပုံတွေပို့၊
ဖုန်းဆက်လာမှ အဲ့ viber မှာပါ တဲ့ဖုန်းကို ဖုန်းဆက်ပြီးမေးမှ အိသန္တာနဲ့ မှားလို့ တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ ။ ဇာဇာထက်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ တဲ့?? viber ကနေ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပုံပြန်ပို့ပေးပါတဲ့ တော်ရုံပဲ လုပ်စားကြပါ ကျွန်မကို နာမည်ထပ်ကြီးေ အာင်မလုပ်ပါနဲ့ ” ဆိုပြီး အားလုံးသိအောင် ချပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိ တ်သတ်တွေ အားပေးကြတဲ့ နာမည်ကြီး ဆက်စီမော် ဒယ်လ် တစ်ေ ယာက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဇာထက် ကတော့ ပုရိသ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ယ။ ဇာဇာထက် က ပြီးခဲ့တဲ့လက သာသနာ့ဘောင် သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သူမ ဝါသနာပါရာ အနုပညာအ လုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ် ကိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာဇာထက်က သူမနဲ့ ရည်းစားဟောင်း နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုသုံးပြီး လူတွေကို ထင်ေ ယာင်ထင်မှာြး ဖစ်အောင် လိမ်လည်နေသူ အကြောင်း အခုလိုပဲ ချပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာဇာထကျ ကတော့ သူမရဲ့ ပွတျဆဲပွီး သားအခဈြေ ရးနဲ့ ဓာတျပုံတှကေို အသုံးပွုပွီး လုပျစားနသေူ ကို အားလုံး အမွငျရှငျးအောငျ ဒဲ့ပဲ ပွော ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ကွောကျလိုကျထှာတျော ရုံပဲဂငျြးဖမျးပါ လူတှကေန ဂိုထဲကမှပွော ခငျြနတော။ ဖဘှေ့တျပျေါမှာ တငျထားတဲ့ ပုံတှယေူသုံးပွီးသူ့ဖဘှေ့တျမှာ တငျထားတာကို သူငယျခငျြးကမွငျပွီး ပုံတှပေို့၊
ဖုနျးဆကျလာမှ အဲ့ viber မှာပါ တဲ့ဖုနျးကို ဖုနျးဆကျပွီးမေးမှ အိသန်တာနဲ့ မှားလို့ တောငျးပနျပါတယျတဲ့ ။ ဇာဇာထကျဆိုတာ ဘယျသူလဲ တဲ့?? viber ကနေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာ ပုံပွနျပို့ပေးပါတဲ့ တျောရုံပဲ လုပျစားကွပါ ကြှနျမကို နာမညျထပျကွီးေ အာငျမလုပျပါနဲ့ ” ဆိုပွီး အားလုံးသိအောငျ ခပြွထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပရိ တျသတျတှေ အားပေးကွတဲ့ နာမညျကွီး ဆကျစီမျော ဒယျလျ တဈေ ယာကျဖွဈတဲ့ ဇာဇာထကျ ကတော့ ပုရိသ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမှု ကို အခိုငျအမာ ရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျယ။ ဇာဇာထကျ က ပွီးခဲ့တဲ့လက သာသနာ့ဘောငျ သို့ဝငျရောကျခဲ့ပွီး လကျရှိမှာတော့ သူမ ဝါသနာပါရာ အနုပညာအ လုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျ ကိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဇာဇာထကျက သူမနဲ့ ရညျးစားဟောငျး နဲ့ ဓာတျပုံတှကေိုသုံးပွီး လူတှကေို ထငျေ ယာငျထငျမှာွး ဖဈအောငျ လိမျလညျနသေူ အကွောငျး အခုလိုပဲ ခပြွလာတာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုယ်လုံးလေးကိုလှုပ်ကာ အမိုက်စားကပြလိုက်တဲ့ သီရိရှင်းသန့်ရဲ့VIDEO